8-da kulan ee ugu fiican ereyga ereyga loogu talagalay Android | Androidsis
Aaron Rivas | 15/04/2021 06:00 | Codsiyada Android, Ciyaaraha Android
Dukaanka Android Play waxaa ku yaal ciyaaro aan la tirin karin oo la baarayo. Waxaa jira noocyo badan: jinsiyadaha, xiisaha, carruurta, dagaalka royale iyo joojinta tirinta. Si kastaba ha noqotee, badankood nooma helin inaan ka fikirno illaa heer maskaxdeena ay tahay inay ku dhaqanto dhammaan awoodeeda, gaar ahaan kuwa xusuusta iyo xigmadda guud. Tani waa waxa cayaaraha ereyada ay ku habboon yihiin, maaddaama ay tijaabiyaan maskaxdeenna maskaxeed.
Haddii aad jeceshahay inaad ka fikirto cayaaraha sida ereyada iskutallaabta ah, boostadani waa adiga. Haddii kale, fiiri si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay hoosta waxaad ka heli doontaa liis leh 8 ciyaarood oo ereyga ugufiican ee Android in hadda laga heli karo Google Play Store. Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay hal ama in ka badan.
Dhammaan cayaaraha la soo sheegay iyo kuwa hoos lagu sharaxay waa bilaash waxayna ku leeyihiin sumcad Play Store. Taa baddalkeeda, waxay ku faanaan soo degsasho badan iyo qiimeyn aad u sarreysa oo caddeysa inay yihiin kuwa ugu fiican qaybtooda. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 CodyCross - Erayada qoraalka
2 Erayada ereyada - Isbaanishka + Ciyaarta ereyada
3 Ereyga qoraalka - Isbaanish
4 Erey Bixin Bilaash ah
5 Ereyga qoraalka - Is qeexitaan
6 Ereyada Layaabka leh: Iskuxirka Waraaqaha Ereyga
7 Ereyga Erayga Erey Bixin ah Raadi ereyo
8 Ereyada Magaalooyinka: Ciyaarta Bilaashka ah ee Bilaashka ah
CodyCross - Erayada qoraalka
Ma jirto hab ka fiican oo lagu bilaabi karo isku-dubbaridkan sidii lagu bilaabi lahaa CodyCross, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee la isweydaarsado ee loogu talagalay Android waqtiga oo dhan. Waana in cinwaankan uusan u imaanin in sidaas loogu ciyaaro wax aan jirin.
Waxay leedahay firfircooni xiiso leh oo madadaalo leh, laakiin yaanay ku wareerin; Waa inaad caqligaaga imtixaanka gelisaa haddii aad rabto inaad xalliso dhammaan imtixaannada iyo ereyada isweydaarsiga ee u muuqda inay ku sii socdaan ciyaarta. Waxaa intaa sii dheer, waad awoodi doontaa inaad wax ku barato inta lagu jiro, markaa uma baahnid inaad aqoonyahan noqotid gabi ahaanba.
Waxaad ku baran kartaa ereyo iyo macno cusub macnaha guud, su'aalaha, iyo weedhaha xariiq kasta. Adeegso awoodda gaarka ah ee aad haysato si aad u muujiso xarafka jawaabta oo aad iska ilaaliso inaad ku dhegto intaad isku dayeyso inaad xalliso erayga.
Waxaa jira boqollaal heerar oo lagu ogaanayo laguna dhaafayo, sidaa darteed saacado aan tiro lahayn oo ciyaar ah waa la damaanad qaaday. Waxa kale ayaa ah in CandyCross uu shaqeyn karo Internet la'aan, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in la ciyaaro marka aad safrayso, xilliyada sugitaanka ama meel kasta iyo xaalad kasta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku ciyaartid internetka la'aan, waxaad yeelan doontaa waxyaabo kooban oo kooban, markaa khibrad dhammaystiran oo xiiso leh, ku ciyaar internetka.
Muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah ciyaartan isweydaarsiga ah ayaa ah inaad kula xiriiri karto koontadaada Facebook. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku mideysid horumarkaaga dhammaan qalabkaaga.
Erayada ereyada - Isbaanishka + Ciyaarta ereyada
Haddii aad raadineyso wax yar oo ka mid ah ereyada ereyga caadiga ah, tani waxay noqon kartaa mid adiga kuu ah. Dhammaystir dhammaan khadadka toosan iyo kuwa toosan ee lagaa hor dhigayo iyo tus maskaxdaada heer kasta.
Waxaa jira tan heerar ah, mid walbana kan kale wuu ka adag yahay; weliba, iyagu dhammaad ma leh, maxaa yeelay waxaa jira "koronto-dhaliye aan la koobi karayn." Kani waa ciyaar feker ah oo aad jimicsi ku sameyn karto maskaxdaada adoo iskudayaya inaad xalliso jumladaha boqolaalka eraybixin ee adiga kugu habboon.
Laakiin intaas maahan. Waana in ciyaartan ay sidoo kale leedahay ciyaar qeexitaan, taas oo aad ku baran karto ereyo cusub iyo, sidaa darteed, qeexitaanadooda, qaabka kediska. Ku quudi qaamuuskaaga ereyo aadan horey u aqoon.
Waxaa jira tilmaamo iyo tilmaamo qaab kasta, sidaa darteed waa inaadan ka walwalin wax badan haddii aadan jawaabta u helin bayaan ama macne. Sidoo kale, kuwa doonaya inay habeeyaan is dhexgalka ciyaarta, waxaa suurtagal ah in la beddelo nooca ama farta.
Developer: Barnaamijyada Quarzo
Ereyga qoraalka - Isbaanish
Kani waa ciyaar kale oo aad u fiican in "qumbaha loo tuuro" taas Waxay leedahay 100 erey oo kala duwan, kaas oo aad ku qaadan karto saacado iyo saacado adoo siinaya madaxa si uu u bixiyo xallinta dhammaan jumladaha inta aad baraneyso macnaha cusub, hagaajinta xusuustaada iyo inaad maskaxdaada u dhigto imtixaanka. Waa, shaki la'aan, waa ciyaar feker madadaalo leh.
Waxaad weydiisan kartaa caawimaad si aad ugu xalliso waraaqaha la muujiyey ama, haddii aad u baahan tahay inaad ka booddo xariiq, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad muujiso ereyada oo dhan. Dabcan, iskuday inaad isku daydo inaad si buuxda u xalliso ereyada iskutallaabta ah adigu, in kastoo kaalmooyinku waa kuwo aan xad lahayn, sidaas darteed istaaggu waa wax aan ku dhicin ciyaartan, illaa aad rabto inaad wax walba xalliso naftaada mooyee.
Haddii aadan jeclayn fagaarayaasha la buuxiyay inay noqdaan madow, waxaad u hagaajin kartaa guddiga sidaad u jeceshahay oo aad u dooran kartaa midabkooda. Isla mar ahaantaana, isdhexgalka iyo naqshadeynta ciyaarta waa wax iska fudud, laakiin si fiican loo shaqeeyay.
Erey Bixin Bilaash ah
Haddii ereyada ereyada isbaanishka gacanta lagu haysto aysan ku filnayn oo aad rabto inaad luqado kale ku dhaqanto inta aad ciyaareyso iyo xallinta ereyada isweydaarsiga, kulankaan ayaa ah midka kugu habboon adiga. Su'aasha, Waxay leedahay ilaa 100 erey oo iskutallaab ah oo Isbaanish ah, 400 Ingiriis ah iyo 65 Boortaqiis ah, kugu filan inaad barato ereyo badan oo cusub oo aad ku hagaajiso ereyadaada luqado kala duwan.
Tani waa ciyaar khafiif ah oo culeyskeedu yar yahay 6MB. Intaas waxaa sii dheer, sida kuwii hore oo kale, uma baahna xiriir internet in lagu ciyaaro, wax muhiim ah haddii aad rabto inaad ku ciyaarto daqiiqado sugitaan ama caajis. Waxa kale ayaa ah, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan noociisa, in ka badan 1 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn 4.4-xiddig leh oo ku saleysan ku dhowaad 90 ratings.
Ereyga qoraalka - Is qeexitaan
Waxaa jira in ka badan 5.500 su'aalood oo ah inaad wajihi doonto ciyaartan xujada ereyga ah. Marka haddii aad kaliya qorsheyneyso inaad dhowr saacadood ku bixiso si aad uga gudubto dhammaan heerarkeeda oo aad uga jawaabto dhammaan bayaannada, sax ma tihid. Waxaad u baahan doontaa inaad aqoontaada u dhigto imtixaanka meelo badan iyo mowduucyo si aad isugu muujiso inaad tahay qofka ugu aqoonta badan, ee aan lagu qaban habeen, ugu yaraan kulankaan.
Sida kuwii hore, waxaad jimicsi ku sameyn kartaa ciyaartaan, maxaa yeelay waa inaad xasuusataa xog fara badan si aad u xaliso ugana jawaabto dhammaan su'aalaha. Dheeraad ah, xujooyinka ereyada iyo xallinta xujada sidan oo kale ah ayaa la caddeeyey inay ka caawinayaan yareynta buuqa. Isdeji intaad buuxineysid dhamaan sanduuqyada ereyada iskutallaabta badan ee diyaarka ah, oo haddii aadan jawaabta wax ka helin, isdaji: waxaad u tagi kartaa caawinta si aad ugu gudubto su'aalaha soo socda iyo, sidaas darteed, ereyada isweydaarsiga , kuwaas oo ku sii kordhaya dhibaatada kolba heerka aad taagan tahay.
Iyo kuwa jecel inay xalliyaan xujooyinka hal-ku-dhigga ah ee habeenkii ama xaaladaha iftiinka hooseeya, ama hurdada ka hor ama wakhti kale, waxaa jira hab mugdi ah oo laga heli karo ciyaartan, taas oo gacan ka geysaneysa in la daryeelo aragtida iftiinka shaashadda .
Developer: Ciyaaraha FgCos
Ereyada Layaabka leh: Iskuxirka Waraaqaha Ereyga
Haddii aad raadineyso erey iskudhaf ah oo ka duwan inta kale, Ereyga Yaabka ayaa ah midka kuugu habboon adiga, maadaama aad awoodi doontid inaad heshid ereyo ku saleysan tilmaamo gaagaaban. Sideed ku ogaan kartaa iyaga? Hagaag, fudud. Kaliya ku xir xarfaha ka muuqda shaashadda oo xalli dhammaan ereyada iskutallaabta ah ee adiga kugu habboon kuna saleysan mawduucyo badan.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in nidaamkan xallinta uusan kaaga baahneyn inaad ogaato jawaabaha su'aalaha gabi ahaanba. Xaaladaha qaarkood xitaa waad qiyaasi kartaa, oo sidaas ayaad ku hormari kartaa ciyaarta. Waa hab kale oo weyn oo wax lagu barto, markaa ma jimicsi kartid maskaxdaada iyo xusuustaada, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa ciyaartan qalab waxbarasho, maxaa yeelay wax badan ayaa laga ogaanayaa!
Qodob kale oo weyn oo ku habboon ereyada cajiibka ah waa taas wuxuu kugu qaadanayaa safar aduunka oo dhan ah. Baro dalal kala duwan intaad xallinayso xujooyinka hal-ku-dhigga ah iyo inaad ku mashquusho safarkaaga! Waxa kale oo ay leedahay qaab ciyaartoy badan, taas oo ah inaad la wadaagto looxyo ilaa 3 saaxiibbo ah ama xitaa aad la tartami karto.
Iyada oo leh qiimeyn xiddig 4.5 ah, ku dhowaad 2 milyan oo faallooyin wanaagsan iyo dhibco ah, iyo in ka badan 100 milyan oo soo degsasho ah, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee lagu ciyaaro ereyada casriga ah ee Android. Dabcan, ma wajaheyno mid miisaan fudud; cabirka kulankaan waa 166 MB.
Developer: Ciyaaraha Fugo
Ereyga Erayga Erey Bixin ah Raadi ereyo
Ciyaar kale oo weyn oo erey-gacmeed ah, gacmaha hoos, iyo mid leh is-dhexgal quruxsan. Intaas waxaa sii dheer, waa cinwaan kale oo isla wadaaga firfircoonida ciyaarta sida ereyada yaabka leh ee horay loo sharaxay. Halkan waa inaad ku xirtaa xarfaha si aad uga jawaabto oo aad u maleyso xallinta xariiq kasta oo ka mid ah xujooyinka ereyada badan ee la is daba dhigo.
Bilowga, dhibku wuu yaryahay, laakiin, markaad horumar gaarto, wax walbo way sii adkaan doonaan. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad walwasho. Waxaa jira tilmaamo aad codsan karto inaad ka hesho waraaqaha iyo ereyada in kabadan 300 eraybixin halkaas ah adiga.
Developer: Booska dev
Ereyada Magaalooyinka: Ciyaarta Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Si loo dhammeeyo isku-dubbaridkan, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa ciyaar kale oo la mid ah labadii hore, taas oo ay tahay inaad sidoo kale ku xirto ereyada si aad u xalliso boqollaal ereyo xuruuf ah.
Halkan waxaad sidoo kale u baahnaan doontaa inaad u safarto adduunka intaad xallinayso ereyada isweydaarsiga, mid walbana wuu ka adag yahay kan kale. Dhexgal naftaada saacado iyo saacado badan ciyaartan intaad maskaxdaada imtixaanka saareyso.
Developer: Ciyaaraha ereyga madow
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 8-da kulan ee ugu fiican ereyga ereyga 'Android'
Moobiilkeygu waa gaabis yahay